MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 822
>Law Eh Soe – The4Photos
> ဓါတ်ပုံ ၄ ပုံ လောအယ်စိုး ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၀၉ တက္ကသိုလ်ပညာရေး ပြီးဆုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) ကျနော်တယောက်ဘွဲ့ ရသွားပေပြီ။ ခုနှစ်ကား ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ၀မ်းသာလိုက်လေခြင်း …။ ဘွဲ့ရလို့ ၀မ်းသာသွားခြင်း မဟုတ်ပါ။ မိမိဖတ်ချင်သောစာများကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖတ်ရပေတော့မည်။ ပြီးတော့ ကြီးကြီးမားမား မိမိ၏ရည်ရွယ်ချက်တခုကို စတင်အကောင်အထည် ဖေါ်ရပေတော့မည်။ အူပည့်အစုံသိုႛ … No tags for this post. Related posts No related posts.
>Burmese refugees ‘sold at brothel’
> မြန်မာ ဒုက္ခသည်များ “ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွင် ရောင်းစားခံရ”Finacial Timesဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၀၉ မြန်မာ ဒုက္ခသည်များ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသို့ ရောင်းစားခံရသည့် ကိစ္စတွင် မလေးရှား အစိုးရ အရာရှိများ ပါဝင်နေသည်ဟု အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ် တဦးက စွပ်စွဲလိုက်သည်။ ထိုင်း မလေးရှား နယ်စပ်ဒေသတွင် လူကုန်ကူးသူများ၏ လက်အတွင်းသို့ လွဲပြောင်းခံရသည့် မြန်မာ ဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး တနှစ်ကြာ အချိန်ယူ စုံစမ်း ရေးသားထားသော အ စီရင်ခံစာကိုနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီတွင် တာဝန်ရှိသော လွှတ်တော် အမတ် Richard Lugarက မလေးရှား အစိုးရကို အင်္ဂါနေ့က ပေးအပ်လိုက်သည်။ အစီရင်ခံစာတွင် တတိယနိုင်ငံတခုကို သွားရောက်ရေးအတွက် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးသို့ ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးစားသော မြန်မာပြည်သားများအကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။...
>Satellite dishesathreat to the Burmese Regime
> ဂြိုလ်တုစလောင်းတို့က စစ်အစိုးရကို စိန်ခေါ်ပြီလောငြိမ်းချမ်းငြိမ်းဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ယနေ့ ထုတ် မြန်မာ့ အလင်း သတင်းစာ တွင် ဆောင်းပါးရှင် ကိုကြီး (ငွေဇင် ယော်) က “စလောင်းတို့ ဗန်းတို့ ရောင်းတန်းက ရပ်ချိန် တန်ကြပြီ” ဆိုသည့် နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလိုင်း ကြည့်ရှုမှု ဆန့်ကျင်ရေး ဆောင်းပါးကြောင့် ရန်ကုန်မြို့သားများနှင့် စလောင်း တပ်ဆင်ရေး ဈေးကွက်တွင် လှုပ်ခတ် သွားခဲ့ရသည်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် မငြိမ်သက်မှုများကို မြန်မာတို့ ဂြိုလ်တု ရုပ်သံလိုင်းများမှ တွေ့ခွင့်ရသောအခါ “အစိုးရဆိုတာ လှုပ်လျှင် ပြုတ်သည်” ဆိုသည့် အတွေးအခေါ်မျိုး ရုပ်သံလိုင်းများမှ တဆင့် ပြည်သူတို့၏ နှလုံးသည်းပွတ်ထဲတွင် ကိန်းဝပ် သွားမှာကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ...
> သင်္ကြန်အတွင်း သေဆုံးမှု၊ ဒဏ်ရာရမှု ယခင်ကထက် များပြားဟု ဂျာနယ်တစောင်တွင် ဖော်ပြမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၈ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ယခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း သေဆုံးမှု၊ ဒဏ်ရာရမှု နှုန်းသည် ယခင်နှစ်များထက် ပိုမို များပြားသည်ဟု ယနေ့ထုတ် Biweekly ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင်မူ သေဆုံး ဒဏ်ရာရနှုန်း နည်းပါးလာကြောင်း၊ “ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့စွာ မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ကို စည်းကမ်းတကျ ဆင်နွှဲခဲ့ကြသဖြင့်” နည်းပါးရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဂျာနယ် နှင့် သတင်းစာတို့တွင် သေဆုံးသူ အရေအတွက်ကို ၅ ဦး ဟု ဖော်ပြကြသည်။ No tags for this post....
> မုတ်သုံမုန်တိုင်းကို ကြောက်လန့်၍ မြို့သို့ ခိုလှုံရန်လာသူများ လှေမှောက်ပြီး သေဆုံးရမိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန် )ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့် သင်္ကြန်မတိုင်မီ ရက်ပိုင်းအလို ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အပူပိုင်း မုန်တိုင်း သတင်းကြောင့် လပွတ္တာမြို့နယ် တောင်ပိုင်းရှိ ကျေးရွာအချို့မှ ရွာသားများ မြို့သို့ ခေတ္တခိုလှုံရန် တက်အလာတွင် လှေ ၂စီးတိမ်းမှောက်ခဲ့ရပြီး ၁၀ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ရသည် ဟုသိရသည်။ ထိုရက်ပိုင်း အတွင်းက မုန်တိုင်း အန္တရာယ်ကို ကြောက်လန့်ပြီး လပွတ္တာမြို့သို့ ခေတ္တခိုလှုံလာသူပေါင်း ထောင်ချီရှိခဲ့ပြီး လပွတ္တာမြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အချို့တွင် ယာယီ ခိုလှုံခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ သေဆုံးခဲ့ရသော ခိုလှုံလာသူများ၏ နေထိုင်ရာ ကျေးရွာ အမည်ကို မေးမြန်းစုံစမ်း၍ မရသော်လည်း...
>Than Soe Hlaing – Nargis Reporter Story 6
> သတင်းထောက်တဦး၏ နာဂစ်ဒိုင်ယာရီ – ၆သန်းစိုးလှိုင်ဧပြီလ ၂၃၊ ၂၀၀၉ကမာကလွန်းရွာ မြင်ကွင်း မြန်မာ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ သံဃာများရဲ့ ဦးဆောင်မှု ကွမ်းခြံကုန်း မြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက် အသီးသီးမှ နေစရာ စားစရာ ဒုက္ခရောက်နေသူများကို နီးစပ်ရာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများက ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက် ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပေါင်း ၆ ကျောင်းထက်မနည်းရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ ကိုယ်တိုင် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုများသော်လည်း မပျက်ဘဲ ကျန်ခဲ့သည့် နေစရာ၊ ယိမ်းယိုင်သွားသော်လည်း အမိုးရှိနေသေးသည့် ဓမ္မာရုံ တို့လို နေရာများမှာ ဒုက္ခသည်များက တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ နေထိုင်ကာ ဆရာတော် သံဃာတော်များ စီစဉ်ပေးသည့် စားစရာများကို စားသောက် နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ မြန်မာ ကျေးလက်ဒေသတွင် သံဃာတော်များ၏...
> ဒီကေဘီအေ၏ သက်သတ်လွတ်စားရန် အမိန့်ကို မကျေနပ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး (၃)ပါး ထိုင်းနယ်စပ်ထွက်လာစောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ ကရင်ပြည်နယ် ပိုင်ကျုံမြို့နယ်ရှိ သံဃာတော်များကို တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓွဘာသာ ကရင် အမျိုးသား တပ်မတော် (ဒီကေဘီ အေ)က သက်သတ်လွတ်အတင်းစားခိုင်းသည့်အတွက်ကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီး ၃ပါး ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တနေရာသို့ ရောက်ရှိလာသည်ဟု သိရသည်။ ဒီကေဘီအေ (၉၉၉) တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်ဖားနွီးက သင်္ကြန်မတိုင်မှီ တရက် နှစ်ရက် အလိုတွင် ပိုင်ကျုံဂွင်အတွင်း သတင်းသုံးနေကြသော သံဃာတော်များ အားလုံး မဖြစ်မနေ သက်သတ်လွတ် စားရမည် ဖြစ်ကြောင်း အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ဟု ထိုင်းနယ် စပ်တွင် ရောက်ရှိလာသည့် ဝါးမေကလား ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးကောဝိဒက...
> ငွေကြည်ရဲ့ ဟဒယရွှင်ဆေး No tags for this post. Related posts No related posts.
>Pai Soe Wai – The Return of The Eagle
> သိန်းစွန်ငှက် အပြန်လမ်း ပိုင်စိုးဝေ ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ (၂၁ – ၃ – ၈၆) နောက်ဆုံးအခေါက်ပါပဲ ကျွန်တော် ရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ် အမေ ။ ရွာဆိုတာ ……… တမာ ထနောင်း ရှားစောင်း ပြာဒ် သန်း ဒဟတ်ပင်တွေနဲ့ ၊ မိုးနှံချုံပုတ် ၊ ရှားပင်ငုတ်တို နီညိုညို ကျောက်ခဲလုံးတွေနဲ့ ထန်းပင်မြင်မြင့်ကြိးတွေကြားက တဲကလေးတစ်လုံးပါ ။ အဲဒီတဲကလေးထဲ အမေ လဲလျောင်းနေပေါ့။ အူပည့်အစုံသိုႛ … No tags for this post. Related posts No related posts.
>Burmese in N.Corolina collecting Signature to free Prisoners
> ဧပြီ ၂၂ မြောက်ကိုရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာတွေ လက်မှတ်စုဆောင်း မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ ယခုဆောင်ရွက်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာကင်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှုအတွက် ထိုဒေသရောက် မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူများက ဒေသခံတို့အား ရှင်းပြခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးရန် မေတ္တာရပ်ခံခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်မှတ်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အချုပ်နှောင်ခံ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအဖြစ် သရုပ်ပြတင်ဆက်မှုကို ကိုသောင်းထိုက်၊ ကိုဇော်သိမ်း နဲ့ ကိုဇော်ဝင်းတင့်တို့က တင်ဆက်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ သံဃာသပိတ်မှောက်ကံဆောင်မှုမှာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းခံခဲ့ရတဲ့ ဆရာတော်ဦးအဂ္ဂဓမ္မကလည်း ကြွရောက်ကူညီခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံ – သစ်ကောင်းအိမ်မှတဆင့် အိုးဝေ ၈၈၈၈) No tags for this post. Related posts No...
> ဧပြီ ၁၉ အယ်လ်အေသင်္ကြန် မြန်မာတွေ လက်မှတ်ထိုး မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ အယ်လ်အေအရပ်က ဥယျာဉ်တခုမှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲ စည်ကားစွာဖြင့် ဈေးရောင်းပွဲများ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများနဲ့ ဧပြီ ၁၉ တနင်္ဂနွေက ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဈေးဆိုင်ပေါင်း ၃၂ ဆိုင်၊ ဧည့်ပရိသတ် ရာချီတဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ အယ်လ်အေသြဂနိုက်ဇာအမည်ရှိ မြန်မာအမျိုးသားရေးတက်ကြွသူအဖွဲ့တခုက ယခုနိုင်ငံတကာကင်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုမှုအတွက် လက်မှတ်များ စုဆောင်းခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံ – တကျွန်းပြန် ဘိုဘို) No tags for this post. Related posts No related posts.
>for grtalk users
> ဂူးဂဲလ်၊ ဂျီတော့ခ် (ဂျီမေးလ်) အကြောင်း တစေ့တစောင်း ဇော်အောင် (ဝါရှင်တန် ဒီစီ) ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ဂူးဂဲလ်တော့ခ် (google talk) ခေါ် ဂျီတော့ခ် (gtalk) သုံးစွဲသူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အဖမ်းခံရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က မိုးမခ နဲ့ တခြားဘလော့တွေမှာ ဖတ်ရတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ အင်တာနက် စောင့်ကြည့်ရေး အောက်မှာ အရဲစွန့် သုံးစွဲနေသူများကို အထူး စိုးရိမ်နေခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ညီငယ်တဦး ဖြစ်သူလည်း မကြာသေးခင်က တက်ကြွလူငယ်တစုနဲ့ အတူ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကို အကြည်ညိုပျက် အသရေဖျက်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရကာ နောက်ဆက်အမှုတွဲအဖြစ် သူရဲ့ အင်တာနက်ဆိုင် ဝင်ထွက် သွားခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း...
>Myo Myint Cho – The Hunger
> အဆာမပြေပုံများ မျိုးမြင့်ချို ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ အကောင်းဖြစ်ဖြစ် အဆိုးဖြစ်ဖြစ် အမြစ်ကနေ လှန်သစ်မယ်ဆိုပြီး ဘာ … ရမက်ပေါ်မှာမှ ဘဝကို မစိုက်ပျိုးမိတာ မိုက်တွင်းနက်မှု … တဲ့ ကျနော့် ငွေတွင်းလည်း မတိမ်ပါဘူး။ “ဖခင်ကြီး” ဆိုသူက “စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားနဲ့” တဲ့ ကျနော်က ကံ ၃ ပါးလုံးနဲ့ မှောက်မှားပြီး “သော့အိမ်” မှာ ပိတောက် ၁၅ ကြိမ်အပွင့်ခံတယ်။ တခုတော့ရှိတယ် ငြိမ်းချမ်းချင်ရုံလေးနဲ့ စစ်ထွက်ခဲ့လား ဆိုလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ တခုတော့ရှိတယ် အဆိုးထဲမှာ အကောင်းရှာလား ဆိုလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဒီတုန်းက မစားရဝခမန်း မနက်ဖြန်တွေ … ခုလို – သဲရှပ်ပုံနဲ့သာ ကြိုပြီး ပက်ပင်းတိုးထားရင်...
> မယ်လ ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် မြန်မာပြည်မှ ထုတ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအချို့ မသုံးစွဲရန် တားမြစ်ချက် ထုတ်ပြန် စောသိန်းမြင့်၊ ကေအိုင်စီဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၀၉ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း ၀င်ပေါက်တခု ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင် မြန်မာပြည်မှ ထုတ်လုပ်သည့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း အချို့ကို မသုံးစွဲရန် တားမြစ်ချက်ကို ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ သုံးစွဲခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသည့် မြန်မာပြည်မှ ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများမှာ အိုးခွက်၊ ပန်းကန်၊ ဗမာတိုင်းရင်းဆေး အမျိုးမျိုး၊ အရောင်တင်မှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ လက်ဖက်ခြောက်နှင့် လက်ဖက်သုပ်တို့ ဖြစ်သည်။ တားမြစ်ချက်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးမှု မရှိပါက ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်ဟု အသံချဲ့စက်က တဆင့် အသိပေး နှိုးဆော်သည်ဟု သိရသည်။ ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် ဗဟိုရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန...
> ရေကြည်မြို့နယ်မှ ပေးစာရက်စွဲ ၂၁-၄-၂၀၀၉ ၂၀၀၉ ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့၌ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရေကြည်မြို့နယ် ပြည်သူ့အားကစားကွင်းတွင် ရှင်အပါး ၁၀၀၀ အလှူပွဲကြီး ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အလှူဒါယကာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရေကြည်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး (ခေါ်) ကြံ့ဖွံ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်တင်၊ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အမှုဆောင် အရာရှိ ဦးဌေးနိုင် နှင့် အခြား ဦးစီးမှူးများ အားလုံးက အောက်ပါအတိုင်း ခိုင်းစေ တာဝန်ပေးထားပါသည်။ အခမ်းအနား ပြုလုပ်ရန် ဘောလုံးကွင်းထဲတွင် အဆောက်အဦးများ၊ အဆောင်များ ဆောက်လုပ်ရန် ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း ၉၉ အုပ်စုမှ တောင်သူများ၊ စာရေးများ၊ ရယက...
>Aung Din – Farewell Poem 2
> နှုက်ဆက်ခဲ့ ခြင်း – ၂ အောင်ဒင် ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ မိတ်ဆွေ တို့ရေ သစ်ရွက်၊ မြေ ကြီး၊ ပန်းပွင့် လူးလွင့်နေတဲ့ တိမ်၊ ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ် အိပ်မက် အေးစက်စက် အသက် ရှူသံ တွေနဲ့ ကျနော်ရှိခဲ့တယ် ၊၊ လမ်းတွေပေါ်မှာ လူတွေနဲ့ အတူ စီးမျောဖူး ခဲ့ မောပန်းကြေမွ ညတွေ ရီဝေယစ်မူး၊ ကုန်လွန်ဖူးခဲ့ နွေဦးကိုကြိုဖို့ အမြဲသတိရပြီး နွေဦး နဲ့ အမြဲတမ်းလွဲခဲ့သူပါ။ စက္ကူတွေ ဆုက်ဖြဲ သစ်ပင်တွေ တပင်ပြီး တပင် လှဲခဲ့ မီးခိုးတွေ တသွင်သွင် မှုတ်ထုက် ကောင်းကင်ကို အရုပ်ဆိုးစေခဲ့ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု မှာ...
>Kyee Myintt Saw’s Light
> ကြီးမြင့်စောရဲ့ အလင်းရောင်ဓာတ်ပုံသတင်းဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ပန်းချီဆရာကြီး ကြီးမြင့်စောက သူ၏ အသက် ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် Light ဟု အမည်ပေးထားသည့် ပန်းချီပြပွဲ တခုကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ လာမည့် စနေနေ့ (ဧပြီ ၂၅) မှ စတင်၍ နှစ်ပတ် ကြာမြင့်မည့် ပြပွဲကို ချင်းမိုင်မြို့တော်ရှိ မြန်မာပန်းချီပြခန်း သုဝဏ္ဏဘူမိတွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ ပြပွဲတွင် အ၀တ်မဲ့ပန်းချီ၊ ရန်ကုန်ရှုခင်းပန်းချီကားများ ပါဝင်မည်ဟု သိရသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Maung Yit – April Notes for Burmese New Year
> ဧပြီလ စကား – မြန်မာနှစ်ကူးကို ကျော်ဖြတ်ပုံ မောင်ရစ် ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ နှစ်သစ်ကူးမှာ စာရေးရမယ်။ မိတ်ဆွေတွေဆီ အခုလိုစာရေးပြီး သတင်းပို့နေကြဆိုတော့ နှစ်ကူးအတွက် အကြွေးဟောင်းတွေရှင်းတဲ့အနေနဲ့ ရေးရတာပါ။ ပြီးတော့ အကြွေးသစ်တွေ ယူရတာပေါ့လေ။ မတ်လကုန် မိုးမခလစဉ်ဆွမ်းကျွေးကို အကျဉ်းချုးံပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားပျက်ပြီဆိုတော့ ကိစ္စအ၀၀မှာ ချွေတာရတဲ့အထဲမှာ အလှူအတန်းတွေကိုပါ ချွေတာနေရပြီလို့ ပြောကြလေမလား မသိ။ သို့သော် အဲဒီလမှာ ဆရာနန်းညွန့်ဆွေရဲ့ အိမ်သူ၊ ဆရာကိုဇာဂနာရဲ့ မိခင်ကြီး စာရေးဆရာမကြီး ကြည်ဦး ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းကျွေးကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ သားသမီးတွေဟာ အပြင်မှာ ကွယ်လွန်ကြတဲ့ မိဘတွေအတွက်လည်း ၀မ်းနည်းကြေကွဲကြတယ်။ အပြင်ကမိဘတွေကလည်း ထောင်ထဲမှာ ပျက်စီးကြတဲ့ သားသမီးတွေအတွက် ပူဆွေးသောကရောက်ကြရတယ်။ အဲဒီအတွက်...
>19th April 2009 – MoeMaKa Weekly Radio
> ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ – မိုးမခရေဒီယို ၁၃ နှစ်ဆီက မန်းသင်္ကြန်တေး သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ ရွေးကောက်ပွဲများကို ဆန်းစစ်ခြင်း – ဗသြ တိုးတက်သော ရှေးခေတ်ဟောင်းကို လွမ်းဆွတ်ခြင်း – ကြေးမုံဦးသောင်း။ မိုးမခ သီချင်းဆိုမိတဲ့ ပါပါလေးသင်္ကြန်ဟာသ – အာရ်အက်ဖ်အေ လူထုဒေါ်အမာ အမှာစကား ကေအင်န်ယူခေါင်းဆောင် ဖဒိုမန်းရှားသမီး ဇိုရာဖန်းအထုပ္ပတ္တိစာအုပ် သင်္ကြန်အကျိုး ၁၀ ပါး – မောင်စွမ်းရည်၊ မိုးမခ သင်္ကြန်ဆန္ဒကဗျာ – ဖိုးသံ(လူထု) ဟဲလိုမြန်မာ့အလင်း – ကြေးမုံဦးသောင်း၊ ဦးပန်တျာ အထူးကဏ္ဍ – မြန်ပြည်လေဘေးသီတဂူတေးများနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းလေဘေးအလှူပေးအပ်ပွဲ စီစဉ်သူ – ဦးပန်တျာ၊ နန်းဖောဆေး၊ စောအယ်ကော၊ ခင်သက်ပန် No...
> မုံရွာထောင်ထဲက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအင်တာဗျူးဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် အီတလီနိုင်ငံ ဗီလာဆန်တာမြို့ (the City of VillaSanta)က မြန်မာပြည်မှ အကျဉ်းသားတဦးကို ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့သားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဂုဏ်ပြုခံရသူမှာ မုံရွာထောင်တွင် အကျဉ်းကျနေသူ မနှင်းမေအောင် ဖြစ်သည်။ ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ၊ ယခုအခါ မုံရွာထောင် အကျဉ်းခန်းတခုတွင် ရောက်နေသူ မနှင်းမေအောင် ခေါ် မနိုဘယ်လ်အေး အကြောင်းကို သိရှိရန် မိုးမခက သူ၏ မိတ်ဆွေ မလဲ့လဲ့နွယ်နှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါသည်။ အပြည့်အစုံသို့ No tags for this post. Related posts No related posts.
> ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ် အမှတ်(၂၇၃)နှစ်ဦး ဆုတောင်းမာမာအေးဧပြီ ၁၉၊ ၂ဝဝ၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေး ချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတဝါသနာရှင်တွေ အားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ – မင်္ဂလာနှစ်ဦး အတာကြူးတဲ့ မဟာသင်္ကြန် တန်ခူးရေပွဲနဲ့ လွဲရတာ ကြာပြီရှင်။ မွေးရပ်ဌာနေ အမိမြေမှာ ပိတောက်ဝါရွှေ ထိန်ထိန် ဝေပါရဲ့လား။ သင်္ကြန်လက်ဆေး မိုးကလေးရော အပြေး လာသလား၊ အေးပါသလား၊ ကားအလှသင်္ကြန် သံချပ်သံတို့ အလျှံအပယ် တွယ်မှတွယ်ပဲလား၊ ဝိုးတိုးဝါးတား သင်္ကြန်ရိပ်က အတိတ်လှလှတွေကို ရေမြေလေ ရှိနေသမျှ သတိတွေ ရနေမှာပါပဲလေ။ xxx ထက်ကောင်းကင် မိုးဖျားက သွန်းလာ၊ ရွာမယ့်...
> နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှဓာတ်ပုံသတင်းဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၀၉အအေးပိုင်းဒေသ ၀က်ဝံ ၂ ကောင် ဂျာမဏီနိုင်ငံ Zoom Erlebniswelt တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် စတင် ဆုံဆည်းကြသည့် မြင်ကွင်း။၀က်ဝံထီး Bill နှင့် သူ၏ ရင်ခွင်အတွင်း တိုးဝင်နေသော ၀က်ဝံမ Lara တို့ကို သောကြာနေ့က အထက်ပါပုံအတိုင်း တွေ့ရသည်။ Bill သည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Bruenn တိရိစ္ဆာန်ရုံမှ ရွှေ့ပြောင်းလာသူဖြစ်သည်။ Polar bears Bill, right, and Lara react, at their first meeting, at the Zoom Erlebniswelt zoo, in Gelsenkirchen, Germany, Friday, April 17, 2009....
> လူတိုင်းအတွက် အခမဲ့ ပညာရေး ကျော်ကျော်ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ ပထမနှစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများရဲ့ ပထမဆုံးနေ့ ခန္ဓာဗေဒအတန်းမှာ ဆရာမ မာရီယန်ဒိုင်းမွန်း(Marian Diamond) က မပျက်စီးအောင် ဆေးစိမ်ထားတဲ့ လူဦးနှောက်တစ်ခုကို လက်ပေါ်တင်ပြပြီး “ဟောဒီ ဦးနှောက်လေးဟာ အလေးချိန် ၃ ပေါင်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အလင်းနှစ် သန်းပေါင်းများစွာထိ ဝေးလံတဲ့ စကြာဝဠာကြီးအထိ တွေးတော ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် ရှိတယ်၊ အဲဒါ မထူးဆန်းလွန်းဘူးလား” လို့ ရှင်းပြနေပါတယ်။ မာရီယန်ဒိုင်းမွန်း (ဓာတ်ပုံ – www.berkley.edu) ဒိုင်းမွန်းဟာ ဘာကလေတက္ကသိုလ် (UC Berkley)က ခန္ဓာဗေဒဘာသာ ပါမောက္ခ ဖြစ်ပြီး အများ ကြည်ညို လေးစားခံရတဲ့ ဆရာမတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။...
>Maung Swan Yi – When Mother Calls
> အမေ့ခေါ်သံ မောင်စွမ်းရည် ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၀၉(မိုးမခက မြန်မာနှစ်သစ် ၁၃၇၁ အတွက်၊ ဆရာစွမ်းရဲ့ ဂန္တ၀င်ကဗျာနဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ အားလုံး အိမ်ပြန်နိုင်ကြဖို့။ မိဘနဲ့ သားသမီးတို့ ပြန်ဆုံစို့။) အရုဏ်အတက်ကုလားတက်ခေါက်သံ ကြားတော့သားနိုးနေပြီ အမေ။ အူပည့်အစုံသိုႛ … No tags for this post. Related posts No related posts.
> စိုင်းခမ်းလိတ်၏ ၆၀ ပြည့်မွေးနေ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်ကြမည်သျှမ်းသံတော်ဆင့်ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် သီချင်းရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်၏ အသက် ၆၀ ပြည့် မွေးနေ့ပွဲတော် အတွက် သူ၏ ပရိသတ်များက ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနား ကျင်းပရန် စီစဉ်နေသည်ဟု နယ်စပ်ဒေသ သတင်းရပ်ကွက်မှ သိရသည်။ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်က သူရေးသားသော မန္တလေးရောက် ရှမ်းတယောက် သီချင်းဖြင့် တရှိန်ထိုး ကျော်ကြားခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်သူ စိုင်းခမ်းလိတ်သည် ရှမ်း၊ မြန်မာ ဘာသာတို့ဖြင့် သီချင်းပုဒ်ရေများစွာ ရေးသား စပ်ဆိုခဲ့သည်။ နိုင်ငံအနှံ့ ရှမ်း နှင့် တခြား တိုင်းရင်းသားများက လေးစား ချစ်ခင်ကြသည့် အနုပညာသည်တဦး...
>Students Movement in Burma (11)
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (၁၁)‘၁၉၆၂ ဇူလိုင်လ (၇)ရက် အရေးအခင်း’အောင်ဝေးဧပြီ ၁၈၊ ၂ဝဝ၉ ၁၉၆၂ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂)ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း စစ်တပ်က ပထစ အစိုးရ လက်ထဲကနေ ဒုတိယအကြိမ် စစ်အာဏာ သိမ်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ စနစ်လည်း အပြီးတိုင် ချုပ်ငြိမ်းခဲ့ရပါတော့တယ်။ စစ်တပ်ဟာ ‘တော်လှန်ရေးကောင်စီ’ နာမည်ခံပြီး တိုင်းပြည်ကို ချုပ်ကိုင်လိုက်ပါပြီ။ တော်လှန်ရေး ကောင်စီ အာဏာသိမ်းတာကို ကျောင်းသား သမဂ္ဂ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ တချို့၊ လူငယ် အဖွဲ့ တချို့နဲ့ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဦးစီးတဲ့ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ဂရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) တို့က အဓိက ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဝိဓူရ သခင်...
> ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားတို့၏ နှစ်သစ်ကူးဓာတ်ပုံသတင်းဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ ရွှေတိဂုံစေတီ ရန်ကုန်မြို့ ဒေသခံ အများအပြားသည် မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ ကို ပန်းခြံများ၊ နာမည်ကျော် စေတီပုထိုးများသို့ သွားရောက်ပြီး အပန်းဖြေခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်း တို့ဖြင့် ကုန်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ (ဓာတ်ပုံ-getty images) ရွှေတိဂုံစေတီ နှင့် ဗိုလ်တထောင်စေတီ မှ မြင်ကွင်းများ ရွှေတိဂုံစေတီ တောင်ဘက်မှ Happy World ကစားကွင်း No tags for this post. Related posts No related posts.
> သင်္ကြန်ရက်များအတွင်း ဦးပိန်တံတား အထူးစည်ကား မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၁ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ သင်္ကြန်အတက်နေ့ နံနက်ခင်း တံတားမြင်ကွင်း။ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပိုမို စည်ကားသည်။ (ဓာတ်ပုံ- မစ္စတာအောင်) ဦးပိန်တံတားသည် မန္တလေးသင်္ကြန်၏ အထူးစည်ကားသည့် အရပ်ဒေသတခု ဖြစ်သည်။ နေ့လည်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့အတွင်းမှ ဒေသခံ အများအပြားဖြင့် အလွန် စည်ကားလေ့ ရှိသည်။ ဦးပိန်တံတားအောက် ရေပေါ် စားသောက်ဆိုင်များတွင်လည်း လာရောက် အပန်းဖြေသူများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ တောင်တမန်အင်းအတွင်းမှ ရေပေါ် စားသောက်ဆိုင်များ (ဓာတ်ပုံ- မစ္စတာအောင်) စားသောက်ဆိုင်များတွင် အုန်းရည်၊ ထန်းရည်၊ ဘီယာ၊ တောအရက်၊ ရမ်အရက်၊ ထမင်းသုတ်၊ လက်ဖက်သုတ်၊ ငါးကလေးကြော် (ကျပ် ၁၅၀၀)၊ ပြောင်းဖူးကြော် (၈၀၀)၊ ဗူးသီးကြော် (၈၀၀)...
>Cyclone Bijli sparesြBurma
> မြန်မာပြည် ဘီဂျလီ ဆိုင်ကလုန်း ရန်မှ လွတ်ပြီAP သတင်းဌာနဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ ဘီဂျလီ ဆိုင်ကလုန်းက အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းမှ ယနေ့ လှည့်ပြန်သွားသဖြင့် မြန်မာအာဏာပိုင်တို့က မုန်တိုင်း အရေးပေါ် ကြေညာချက်များကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာပြည် အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ တချို့တွင် မိုးအကြီးအကျယ် ရွာခဲ့သည်။ “မုန်တိုင်း သတိပေးတာတွေကို ရပ်လိုက်ပြီ။ မုန်တိုင်းဘေးကနေ လွတ်သွားပါပြီ” ဟု မိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာန အကြီးအကဲ ဦးထွန်းလွင်က ပြောသည်။ ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစိုးရ၏ ကြေညာချက်တွင် အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှ လှေသင်္ဘောများ လုံခြုံစိတ်ချသို့ခိုလှုံရန် ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်လည်း ယနေ့ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည်...
>Mann Win Maung – Biography Part 14
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း ၁၄ မှတ်စုမှတ်တမ်း ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ မိုးလရာသီဖြစ်၍ စစ်တကောင်မြို့တွင် မိုးသည်အခါမသင့် ရွာပြီးစွေ၍ မိုးဖွဲဖွဲကလေး ရွာတတ်သလို တစ်ခါတလေ သဲကြီးမဲကြီးလည်း ရွာသည့်ပြင် လေပြင်းပါတိုက်ခတ်တတ်ပါတယ်။ မိုးကောင်းကင်သည် မိုးသားများကင်းစင်ပြီး လင်းလာသည်ဟူ၍ မရှိ။ မိုးမရွာသော အခါများ၌ အမြဲပင် အုံ့မှိုင်းမှိုင်းရှိပြီး စွတ်စွတ်စိုစို ဖြစ်နေပါသဖြင့် စစ်တကောင်းမြို့တွင် နေရစဉ် စိတ်ကြည်လင် သာယာခြင်း မရှိလှပေ။ အူပည့်အစုံသိုႛ … No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 822 of 901«1...820821822823824...901»
>The Geek - To Ko Zarganar - Election Letter